Jaantusku wuxuu ka digtoonaa 4 baasaboorka
emaylka spam waxay ka sameeyaan aqlabiyad badan oo ka mid ah waraaqaha lagu gaaro dadka kombiyuutarada. Inta badan emailada dadku waxay ka yimaadaan spam. Xaaladaha intooda badan, emayadahaan waxay ka soo jeedaan bots iyo botnets. La dagaallanka weerarada galmoodka ma aha hawl fudud. Tusaale ahaan, mid waa inuu maanka ku hayaa tirada bots, farriimaha loo diro iyo sidoo kale bytes soo diray botnet - covert video identification system.
Oliver King, khabiir sare oo ka socda Semt , ayaa halkan ka hadlayaa qaar ka mid ah weerarrada botnet iyo sida loo xakameeyo saamayntooda. Ka ilaali bacaha soo socda
Grum botnet waxaa ku shaqeeya qaar ka mid ah farsamooyinka cusub si ay ugu soo kabtaan dhibbanayaashooda. Khadkaan botnet waa rootkit qaab-keli ah kaas oo aad u adag in la isticmaalo sifooyinka si loo ogaado. Nidaamyada hawlgalka intooda badan, botnetkaan wuxuu u shaqeeyaa fayraska caadiga ah, taas oo ay ku qaaddo qaar ka mid ah diiwaan-geliyeyaasha dhibbanaha. Nooca weerarka noocan ah, waxaa caddaatay in faylasha autorun badankoodu ay dhaqdhaqaaqayaan
Goobtu waxay dhacdaa sida spam iibinta alaabada daawooyinka sida Viagra. Grum waxay leedahay 600,000 oo xubnood, oo mas'uul ka ah inay diraan in ka badan 40billion emails maalin kasta niche bartilmaameedka. Grum ayaa sidoo kale ka qayb qaadata in ka badan 25% emaylka spam ee dhibanayaasheeda.
Bobax wuxuu dhacaa sida botnet qarsoodi ah oo ka muuqata macaamiisha web browser. Weerarkani wuxuu adkeynayaa kombuyuutarrada koofiyada cad si ay u ogaato, inay noqoto mid aan suurtagal ahayn in la raadiyo. Hadda, in ka badan 10,000 oo xubnood ayaa ku jira weerarkan..Sidoo kale, waxay ka qaybqaadaneysaa qiyaastii 15% dhammaan emaillada oo la soo diro waqti dambe. Laga soo bilaabo shaxdan, Bobax wuxuu mas'uul ka yahay inuu u diro qiyaastii 27 bilyan e-mail spam maalin kasta. Weerarka Bobax wuxuu u eg yahay khaanad caan ah oo caan ah. Qaar ka mid ah noocyada ficilka ah waxaa ka mid ah soo wicista taleefanka. Spamkan wuxuu weerari karaa ka dib marka la mariyo kanaalada kala duwan. Waqtiga xiga waxaad kireysaneysaa boorso, iska ilaali ilaha.
Laga soo bilaabo 2007, Pushdo ayaa soo dirtay emailada spam ee in ka badan 19 bilyan oo internetka ah adduunka oo dhan. Pushdo wuxuu billaabay weerarkiisa ballaaran isagoo raacaya Storm botnet. Si kastaba ha noqotee, Duufaanku mar dambe ma ciyaaro, laakiin Pushdo wali way socotaa. Pushdo ayaa u muuqda sida software downloader ah. Marka ay isticmaalayaashu ku soo galaan, waxay xayeysiiso barnaamij kale oo lagu magacaabo Cutwail. Cutwail wuxuu u dhacaa inuu noqdo software spaming, kaas oo hela helitaanka kombuyuutarka dhibbanaha. Spam Pushdo wuxuu ku yimaadaa siyaabo kala duwan, oo ay ku jiraan casinos online, daawooyinka iyo nidaamyada phishing.
Xasuuqii ka badbaaday botnet weyn oo khasaare badan ayaa ka dhacay 2008. Qaar ka mid ah weerarrada ku dhacay mowduucaan waxaa ka mid ah botnet McColo. Weerarka spam botnetka wuxuu ka kooban yahay shabakad ku dhawaad ​​laba milyan oo baaskiil. Mid ka mid ah hababka gaarka ah ee weerarradu waxay ka kooban yihiin sida weerarrada 3da subaxnimo illaa 7da subaxda (GM-5) maalin kasta. E-mail-yada waxaa ka mid ah muraayadaha emailka laga helo qaar ka mid ah cinwaannada emailka ah iyo sidoo kale fariimaha isdhexgalka bulshada. Weerarkan isbaarida badanaa looma ogaan karo oo waxay u muuqan karaan sida spamada daawooyinka caadiga ah.
emaylka spam waxay ka yimaadaan kulan caadi ah oo loogu talagalay dadka isticmaala internetka maalin kasta. Waa lagamamaarmaan u ah milkiilayaasha bogagga inay isticmaalaan fursadaha filtering spam. Waxaa intaa dheer, dadka isticmaala internetka waa inay kombiyuutaradooda ku hubiyaan iyagoo rakibaya software-ka ugu dambeeyay